တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန် က ပေကျင်း ၂၀၂၂ မသန်စွမ်းအိုလံပစ် ဆောင်းရာသီအားကစား ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မည် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်နှင့် နိုင်ငံတကာ အိုလံပစ်ကော်မတီ (IOC) ဥက္ကဋ္ဌ Thomas Bach တို့အား ပေကျင်း ၂၀၂၂ အိုလံပစ် ဆောင်းရာသီအားကစား ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်နေသည်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် မတ် ၄ ရက် ညပိုင်း၌ အမျိုးသားအားကစားရုံတွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသော ပေကျင်း ၂၀၂၂ မသန်စွမ်းအိုလံပစ် ဆောင်းရာသီအားကစား ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ ရှီက အားကစားပွဲများဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေညာပေးမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းအခမ်းအနားကို China Media Group က တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် xinhuanet.com ကလည်း ဓာတ်ပုံများနှင့် သတင်းများအား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, March3(Xinhua) — Chinese President Xi Jinping will attend the opening ceremony of the Beijing 2022 Paralympic Winter Games scheduled on Friday night at the National Stadium.
Xi, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, will declare the Games open.
The ceremony will be broadcast live by China Media Group, and xinhuanet.com will provide live broadcast in photos and text. ■
Photo : Chinese President Xi Jinping and President of the International Olympic Committee (IOC) Thomas Bach attend the opening ceremony of the Beijing 2022 Olympic Winter Games in Beijing, capital of China, Feb. 4, 2022. (Xinhua/Ju Peng)